बाक्लो र लामो कपालको लागि यसरी प्रयोग गर्नुहोस् चिनी र श्याम्पूको मिश्रण ! – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Intresting/बाक्लो र लामो कपालको लागि यसरी प्रयोग गर्नुहोस् चिनी र श्याम्पूको मिश्रण !
सुन्दर,बाक्लो र लामो कपाल हरेक महिलाको चाहाना हुन्छ । महिला होस् या पुरुष हरेक व्यक्ति रेशमी र बाक्लो कपाल चाहन्छ । अहिलेको समयमा व्यस्त जीवनशैली र प्रदुषणका कारण कपाल सम्बन्धि थुप्रै समस्या देखा पर्न थालेको छ जस्तै: कपाल झर्ने, कपालमा रूखोपन आउने। मानिसहरु कपाल सम्बन्धि समस्या हटाउँन थुप्रै महँगा महँगा समानको प्रयोग गर्छन् । तर पनि कपाल सम्बन्धि समस्याबाट छुटकारा पाउँदैनन्।
कपाल स्वस्थ र मजबूत बनाउँनु छ भने बजारमा पाईने महँगा सामानहरु हैन, घरमै चिनीको प्रयोगले कपालको समस्या हटाउँनुका साथै मजबूत, घना ,लामो र रेशमी बनाउँन मद्दत गर्छ । चिनी र श्याम्पूको मिश्रण बनाएर कपाल पखाल्नाले यसले कपालको रुखोपन हटाउँछ ।
चिनी र श्याम्पू प्रयोग गर्ने तरिका
चिनी र श्याम्पूको मिश्रणको प्रयोगले कपाल चम्किलो हुन्छ । एक चम्चा चिनी श्याम्पूमा मिलाउनुहोस् र चिनी राम्रो सँग घुल्न दिनुहोस् । त्यसपछि, बनेको मिश्रण बिस्तारै कपालमा लगाउँनुहोस् । मिश्रण लगाएपछि एकछिन कपाललाई सुक्न दिनुहोस् । र केहि समयपछि तातो पानीले कपाल पखाल्नुहोस्।
कपाल मजबूत बनाउँनको लागि टाउकोको छाला सफा हुनुपर्छ। बढ्दो प्रदुषणको कारण टाउको फोहोर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा श्याम्पूमा चिनी मिलाएर टाउकोमा प्रयोग गरि धुँदा टाउकोको छाला सफा हुन्छ। श्याम्पूमा एक चम्चा चिनी मिलाएर यसलाई दुई मिनेटसम्म हल्का हातले टाउकोमा लागएर केही समय पछि टाउको धुनुहोस्। यसले टाउकोको छाला सफा राख्न मद्दत गर्छ।
हरेक महिला चाहन्छन् कि उनीहरुको कपाल घना र लामो होस् । यसको लागि श्याम्पूमा एक चम्चा चिनी मिसाएर यसको मिश्रण प्रयोग गरि कपाल धुनु पर्छ । यसो गर्दा कपाल बढ्नुका साथै चम्किलो हुन्छ । यसको लागि हप्तामा एक पल्ट चिनी र श्याम्पूको मिश्रणले कपाल धुनु पर्छ ।
यदि तपाईं आफ्नो सुक्खा र फिजी कपालले चिन्तित हुनुहुन्छ भने, तपाईंको लागि श्याम्पू र चिनीको मिश्रण निकै लाभदायक हुन सक्छ। चिनी र श्याम्पूको मिश्रणले कपालमा नमी ल्याउँछ। हप्तामा एक पल्ट यसको प्रयोगले कपाल नरम र चमकदार हुन्छ।
जाडोको समयमा कपालमा चायाँ पर्न सक्छ । यसको कारण कपाल झर्न सुरु हुन्छ । चायाँको समस्या हटाउँन चिनी र श्याम्पूको मिश्रणको प्रयोग निकै लाभदायक हुन्छ । यसले कपलबाट चायाँ हटाउँछ । यसको लागि हप्तामा दुई पटक यसको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
तौल घटाउन खाली पेटमा ज्वानो पानी खानुस्
दाँतमा पहेँलो खियाँ लाग्यो ? उसोभए मात्र यो घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्
यी ४ राशिका व्यक्ति हुन्छन् निकै उत्कृष्ट, तपाईको कुन ?